INtshumayeli 3:11 - Unaphakade kwiintliziyo zabantu
Unqulo & Umoya Iingxelo zeBhayibhile
Ivesi leMini - Usuku 48
Wamkelekile kwiVesi leMini!
Ivesi leBhayibhile namhlanje:
Wenze into enhle ngexesha layo. Kwakhona, ubeke ubuphakade entliziyweni yomntu, kodwa ukuze angakwazi ukufumana oko uThixo akwenzile ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni. (ESV)
Ukucinga Kwamhlanje: Ukuphakade Kwiintliziyo Zamadoda
UThixo ungumdali . Akazange nje enze konke , wenza konke okulungileyo ngexesha layo. Igalelo elithi "elihle" apha lithetha "okufanelekileyo."
UThixo wenze yonke into ngenjongo yayo efanelekileyo. Ngethuba le njongo ichaza isizathu esihle sokuba uThixo wadala. "Yonke into" ibandakanya, kakuhle, yonke into. Oko kuthetha wena, kunye nabo bonke abantu:
INkosi yenza yonke into ngenjongo yayo, nabangendawo ngenxa yomhla weengxaki. IMizekeliso 16: 4 (ESV)
Ukuba sinokufunda ukufumana nokwamkela zonke izinto ebomini ukwazi ukuba uThixo wenze into ngayinye ngenjongo enhle, kwanezona ndawo zinzima kakhulu kwaye zibuhlungu ziza kuthwala. Yiyo ndlela esizinikele ngayo kulwalamano lukaThixo . Siyamkela ukuba unguThixo kwaye asikho.
Abahlali kwili Hlabathi
Ngokuqhelekileyo sizivakalelwa njengabafokazi kweli hlabathi, kodwa ngeli xesha, sinqwenela ukuba yinxalenye yexesha elingenammiselo . Sifuna injongo yethu nomsebenzi wethu ukubala, kubalulekile, ukuhlala ngonaphakade. Sinqwenela ukuqonda indawo yethu kwindalo yonke. Kodwa ininzi yexesha asikwazi ukwenza ingqiqo yalo naluphi na.
UThixo usibeka ngonaphakade kwintliziyo yomntu ukuze sifune ukumthanda kwakhe.
Ngaba uye wakha weva umKristu uthetha nge-"imfumba efana noThixo" okanye "umgodi" ngaphakathi entliziyweni eyabakhokelela ekubeni nokholo kuThixo? Umkholi unokungqina ngalo mzuzu omuhle ngokwenene ngexesha athe waqonda ukuba uThixo wayengumntu olahlekileyo kwipuzzli ehambelana ngokupheleleyo kuloo mgobo.
UThixo uvumela ukudideka, imibuzo ecelomngeni, ukulangazelela umnqweno, konke, ukuze simlandele ngokunyanisekileyo.
Nangona kunjalo, xa simfumana kwaye siyazi ukuba uyiphendule kuyo yonke imibuzo yethu, ezininzi iimfihlelo zikaThixo ezingapheliyo ziyaqhubeka zingaphendulwa. Icandelo lesibini levesi lichaza ukuba nangona uThixo ebeka ngaphakathi kwethu ummangaliso wokuqonda ukuphakade , asiyi kuqonda ngokupheleleyo yonke into uThixo ayenzile ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni.
Sifunda ukuthemba ukuba uThixo uye wafihla izinto ezifihlakeleyo ngenxa yethu. Kodwa sinokuqiniseka ukuba isizathu sakhe sihle ngexesha layo.
Usuku Olulandelayo >
IBhayibhile ngokuxhalabisa nokukhathazeka
10 Ukukhanyisa iiCotes zokuxolela
Iintsikelelo Zokuthobela - Duteronomi 28: 2
Amandla Am ayenziwe apheleleyo kwiintlupheko - 2 kwabaseKorinte 12: 9
UThixo Uyamthanda Umniki Ovuyo - 2 Korinte 9: 7
Umngeni we-Khalid: AmaSilamsi aguqukela ebuKristwini
UDouglas kunye noMthandazo We-Answered Prayer
IBhayibhile Ichaza Njani Ukholo?
I-Libra no-Aquarius Uthando olufanelekileyo
Indlela yokukhetha kwaye ubuze isitifiketi ukuba uhlale kwiKomiti yakho yokuDumala
Alaya-vijnana: I-Storehouse Consciousness
Yiyiphi Impahla AmaYiputa aseMandulo ayegqoka?
Baye Baba Njani Iingubo Ezibomvu?
Iincwadi Zabantwana Ezikhuthaziweyo Ngeziphepho
Cómo contactar ne-Centro Nacional de Visas (NVC)
Usuku loNyulo: Kutheni siVote xa siVote
Ukuzibulala ngokwesondo nge-Honeybees
UJon Favreau, uVince Vaughn noPetros Billingsley: Abahlobo kunye nabaQhagamshelana nabo rhoqo
Ukuthi Ungabiza Kulula ii-Alkene Chains
Ziyintoni i-Mass Noun?
Inkcazo yokuYinqoba umdlalo weNtsana yeNtswana
UJan Matzeliger kunye neMbali yezoKhenketho kweeNtloko
Imfihlelo yokuPhelela iFree Backrock iqalisa
Ukufumana iSampuli Inkcazo kunye nemizekelo yezibalo
Amacandelo okuQinisekisa ngeScaffolding
I-Vowel (Izandi kunye neencwadi)
Iikati njengezithunywa zikaThixo: iiNgelosi zezilwanyana, izikhokelo zomoya kunye neengqungquthela